September 2021 – Grab Love Story
ဘ ကြီး အောင် နဲ့ခိုင် လေး
by admin September 25, 2021 September 25, 2021 0
ခိုင်လေး တယောက် သူများတွေ အပြန်အလှန်ချပ်နေကြသော ချပ်တင်းတွေကို ဖတ်ပြီး။ သူမ မှာ ဖောင်းကြွလာသလို ခံစားနေရသည်။ အတွင်းမှ အရည်တွေ လည်း တစိမ့်စိမ့် စီးကျလာခဲ့လို့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီတခုလုံးလည်း ရွဲနေခဲ့ပြီ။ သူမ မနက်စောစော ရုံးသွားဖို့ ဖယ်ရီစောင့်နေတုန်းဖုံးမြည်လာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်း ဇာခြည်ဝင်းမြင့် …
တုန်တုန် လာ တဲ့ မီမီ
အချိန် က ည ကိုးနာရီခွဲလုပြီ။ ရန်ကုန် မအူကုန်းရပ်ကွက်သည် နေ့လည်ဘက်တွင် လူစည်ကားသလောက် ညနက်လာလျှင် လူအသွား အလာက ပြတ်လာမြဲဖြစ်သည်။ သုံးဆယ့်လေးလမ်းထဲရှိ ‘ထွန်းတောက်’ ဆေးခန်းထဲတွင် ဒေါက်တာကိုလတ်တယောက်ထဲ စာထိုင်ဖတ်နေမိ၏။ မိုးဖွဲဖွဲရွာနေသည်မို့ ညရှစ်နာရီကျော်လောက်ကတည်းက ဆေးခန်းကို လူနာမလာတော့ … ကိုးနာရီခွဲ ဆေးခန်းပိတ်ချိန်အထိတော့ လူနာ …
အရမ်း သဘောကျတယ် ကို
အ သား စိုင်ချင်း အားပါပါ ရိုက်သံက တိတ်ဆိတ်သည့် ည ထဲ စည်းချက်မှန်မှန် ထွက်ပေါ်နေသည်။ ပြွတ်ပြတ် ပြွတ်ပြတ် နှင့် ငဖယ်ထောင်း ချိန် ငရုပ်ဆုံထဲ စေးကပ်နေသည့် ကျည်ပွေ့လို အသံမျိုးကိုလည်း သဲ့သဲ့ ကြားရတတ်သည်။ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်းနှင့် ကြိတ်၍ ညည်းညူသံတို့ကိုလည်း …
ကောင်း လိုက် တာ ……… ချစ် တယ် …… မမဝ တီရယ် ” ဖယ်တော့ … ဇော် သူ … နင် သိပ်အတင်းရဲတာပဲ … မောင် သိသွားရင် … ငါတို့အိမ်ထောင်ရေး ပျက်စီးမှာဟ ” ” …
ဆေး ရုံကြီး အပြင်ဘက် မှန်ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကိုလှမ်းကြည့် မိတော့ ကျေးငှက်သံလေးတွေနဲ့ အစိမ်းရောင် သစ်ပင်ကြီးများကြောင့် ဘဝ အမောတွေကို ခဏတာ မေ့ပျောက် သွား စေတာပဲလေ။ မနက် ၈နာရီ ကျော်ကျော် လေးပဲ ရှိသေးတာပါ။ ညက ဆိုင်ကယ် အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်တဲ့ လူနှစ်ယောက် …
“ပြန်တော့ မှာ လားကွ” “သွားတော့မယ် ကိုကြီးစိုးရာ အိမ်မှာက တီလေးတယောက်ထဲဗျ” “ဗညားရာ မင်းလဲ မိန်းမတောင် ရပါဦးမလားကွာ” “အဲ့ဒါတွေက နောက်မှပါဗျာ အရေးကြီးတာက ကျနော့်ရဲ့ တဦးတည်းသောဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့ ကျနော့်အဒေါ်ပါဗျာ” “အေးပါကွာ သိပါတယ် ငါကစတာပါကွာ ကျေးဇူသိတတ်တာ မမှားပါဘူး ဗညားရာ” ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ဗညားအိမ်သို့ …
သွား လူ လည် ကြီး
တိတ် ဆိတ်နေ တဲ့ ညတညမှာ နှစ်နှစ်ချြိက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေရာမှ ပူအိုက်လာသလိုခံစားလိုက်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်လူးကာလိမ့်ကာနှင့်နိုးလာသည်။ အိပ်မှုံစုံဖွားနဲ့ အဲကွန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာမီးမှမလင်း… စိတ်အတော်ညစ်သွားတယ်။ ရန်ကုန်မြို့အစွန်အဖျား၃ထပ် တိုက်ခန်းအတွဲလေးတွေမှာနေမိတာကိုး… ထုံးစံအတိုင်းမီးကပျက်နေပြီလေ။ ကုတင်ဘေးနားရှိတဲ့ပြတင်းပေါက် ကိုထဖွင့်… ပြတင်းပေါက်ကလဲဖွင့်ခဲတော့ကြပ်နေသေးတယ်…. ညကသောက်ထားတဲ့အရှိန်နဲ့ လူကပိုပူနေသလိုခံစားနေရသည်။ ကုတင်ဘေးက အသင့်ထား တဲ့ရေဗူးကိုလှမ်းစမ်းကြည့်တော့လဲရေကုန်နေတယ်…. သက်ပျင်းချရင်း ဓါတ်မီးကို ကုတင်ဘေးက Laptop တင်ထားတဲ့စားပွဲ …
ငယ် စဉ်ကပင်စ၍ အလှကြိုက်မှုအကောင်းကြိုက်မှုများဖြင့် နစ်မွန်းလျှက်မိဘ အမြှောက်အစားကိုခံကာ ပျက်စီးခဲ့ရသော သူမ၏ပေါ့လျှော့သော စိတ်ဓါတ်တွင် ငယ်စဉ်ကပင် ရည်းစားထားချင်သည့်စိတ်ဖြင့်ဆယ့်သုံးနှစ် ဝင်ခါစကပင် အတန်းတူ ကစားဖက် လူလှလူချော လူခန့်ကလေး မောင်မြနှင့်ချစ်ကြိုးသွယ်ခဲ့လျှက် ရည်းစား ဖြစ်ခဲ့ရ လေသည်။ တစ် နှစ်၊ နှစ်နှစ်ဆိုသော အချိန်ကာလသည်ကျောင်းတက်ကျောင်းဆင်းရင်းဖြင့်ပင် တရက်ပြီး တရက်၊ …
ပြန် ပင့် ပေး တဲ့ မမပွင့်
ရှမ်းပြည် နယ် တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ ဆောင်းတွင်း .။ ခြံထဲမှာ မင်းလတ် ကင်းတာဝန်ကျနေသည် ။ ညဥ့်နက်လာလေ အေးလာလေမို့ မင်းလတ်ဂျာကင်ကို လည်ပင်းအထိ ဇစ်ဆွဲတင်လိုက်သည် ။ သေနတ်ကို ဘယ်လက်နဲ့ ပိုက်ထားရင်း ညာလက်နဲ့ အပြာရင့်ရောင် တောဆောင်းဦးထုပ်ကို ရှေ့ကိုငိုက်ငိုက် ဆွဲချသည် ။ အိမ်ကြီးဆင်ဝင်အောက်မှာ …
မွန် မွန် အရမ်း ကောင်း တယ်
မွန်မွန်တစ်ယောက် မိခင်ဖြစ်သူကစူလိုက်သဖြင့် စူပုတ်ပြီး အိမ်ပြင်ထွက်လာသည်။ အသက် ၁၈နှစ် အရွယ် မွန်မွန်ဟာ နမည်နဲ့လိုက်အောင် ဥစ္စာပေါရုပ်ချော လှမ်းလျှောက်တိုင်း ဘယ်ညာယိမ်းနေတဲ့ တင်ကြီးနှစ်လုံးနဲ့ နိုးနှစ်လုံးဟာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ဖွံဖြိုးလှသည်။ သမီးဘယ်သွားမလို့လဲ မျက်နာကစူပုတ်နေတာဘဲ ဘာလဲ သမီးအမေဆူလိုက်လို့လား… လာလာအဖေနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့…. အဖေဆိုလို့ အဖေရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး မွန်မွန် ၁နှစ်ခွဲအရွယ်မှာ …